ဂိမ်းကစားနေတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်မင်္ဂလာပွဲကို တက်ရောက်ကျင်းပဖို့တောင် ငြင်းဆန်ပစ်ခဲ့တဲ့ Gamer သတို့သမီး - Myanmar People Alliance
ဂိမ်းကစားနေတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်မင်္ဂလာပွဲကို တက်ရောက်ကျင်းပဖို့တောင် ငြင်းဆန်ပစ်ခဲ့တဲ့ Gamer သတို့သမီး
သတို့သမီးတွေအားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့အထူးနေ့ကြီးမှာ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်သွားအောင်လုပ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်ကြရပြီး မင်္ဂလာပွဲကိုလည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့ပြီးဆုံးစေချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တျုတ်နိုင်ငံရှိ ဒီသတို့သမီးလောင်းကတော့ League of Legends ဂိမ်းက ကစားပွဲကို
အပြီးသတ်နိုင်ဖို့အတွက် သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်မင်္ဂလာပွဲကိုတောင် တက်ရောက်ဖို့ငြင်းဆန်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသတို့သမီးဟာ သူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် အရမ်းကိုနောက်ကျနေခဲ့ပြီး မင်္ဂလာပွဲဧည့်သည်တွေထဲမှ တစ်ဦးက သူမဟာ ကွန်ပျူတာဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဂိမ်းကစားနေကြောင်း
သိရှိခဲ့ရတာကြောင့် သူမရဲ့မိဘတွေ၊ အနာဂတ် ယောက္ခမကြီးတွေနဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့က သူမအား ဂိမ်းကိုအဆုံးသတ်ပြီး ကွန်ပျူတာဆိုင်မှထွက်ခွါဖို့ မရမကတောင်းပန်နေခဲ့ပေမယ့် သူမဟာ ခေါင်းမာမာနဲ့ငြင်းဆန်နေခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ သတို့သမီးဟာ ဂိမ်းကစား
နေတုန်း အဖြူရောင် မင်္ဂလာဆောင်ဂါဝန် ဝတ်ဆင်ထားပြီး ဆံပင်နဲ့မိတ်ကပ်လည်း လိမ်းခြယ်ပြင်ဆင်ပြီးနေပါပြီ။ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ တင်းမာနေတဲ့ကွင်းလယ်တိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့် သူမဟာ ထိုင်ခုံမှထဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး သူမကစားပွဲ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အထိ အချိန်
အနည်းငယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။” ကလေး လာ၊ ငါတို့သွားရတော့မယ် “လို့ သတို့သမီးရဲ့ယောက္ခမက ပြောနေခဲ့ပြီး “အခမ်းအနား မကြာခင်စတော့မယ်“ လို့ သူမရဲ့သတို့သားက ဘေးကနေသာ အော်ဟစ်နေခဲ့ပါကြတယ်။ သူတို့အားလုံးက သတို့သမီးကစားတာကို
မရပ်တန့်နိုင်တာကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူက သတို့သားကို ပါးရိုက်ပစ်ပြီး ”မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ? မင်းရဲ့ဇနီးကိုတောင် မင်း မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလား အခုချက်ချင်း သူ့ကိုဆွဲထုတ်“ လို့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ သတို့သားဖခင်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်သတို့သားက သူ့ရဲ့သတို့သမီးကို
နောက်ဆုံးအကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် သူနဲ့သူရဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က သူမအားထိုင်ခုံပေါ် ကနေဆွဲထုတ်ပြီး ကွန်ပျူတာဆိုင်ရဲ့အဝေးကို ဆွဲခေါ်သွားခဲ့လိုက်ကြပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့ သတို့သမီးဟာ မင်္ဂလာပွဲကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့
မကျင်းပနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ လူအချို့ကလည်း သူတို့ကလူသိများတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်စေဖို့အတွက်သာ တမင်ရိုက်ကူးစီစဉ်ထားတယ် လို့လည်း ထင်ကြေးပေးထားကြပါသေးတယ်။ဘယ်လိုတောင်လား သတို့သမီးရယ် ယောက္ခမကြီးတွေတောင် လာဆွဲခေါ်ရလောက်တဲ့အထိ ပါလား။
သတို့သမီးတှအေားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့အထူးနကွေီ့းမှာ စိတျကိုတညျငွိမျသှားအောငျလုပျရတဲ့အထိ ဖွဈကွရပွီး မင်ျဂလာပှဲကိုလညျး အဆငျပွပွေနေဲ့ပွီးဆုံးစခေငျြတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တြုတျနိုငျငံရှိ ဒီသတို့သမီးလောငျးကတော့ League of Legends ဂိမျးက ကစားပှဲကို
အပွီးသတျနိုငျဖို့အတှကျ သူမရဲ့ကိုယျပိုငျမင်ျဂလာပှဲကိုတောငျ တကျရောကျဖို့ငွငျးဆနျပဈခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါသတို့သမီးဟာ သူမရဲ့မင်ျဂလာပှဲအတှကျ အရမျးကိုနောကျကနြခေဲ့ပွီး မင်ျဂလာပှဲဧညျ့သညျတှထေဲမှ တဈဦးက သူမဟာ ကှနျပြူတာဆိုငျတဈဆိုငျမှာ ဂိမျးကစားနကွေောငျး
သိရှိခဲ့ရတာကွောငျ့ သူမရဲ့မိဘတှေ၊ အနာဂတျ ယောက်ခမကွီးတှနေဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူတို့က သူမအား ဂိမျးကိုအဆုံးသတျပွီး ကှနျပြူတာဆိုငျမှထှကျခှါဖို့ မရမကတောငျးပနျနခေဲ့ပမေယျ့ သူမဟာ ခေါငျးမာမာနဲ့ငွငျးဆနျနခေဲ့ပါတယျ။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ သတို့သမီးဟာ ဂိမျးကစား
နတေုနျး အဖွူရောငျ မင်ျဂလာဆောငျဂါဝနျ ဝတျဆငျထားပွီး ဆံပငျနဲ့မိတျကပျလညျး လိမျးခွယျပွငျဆငျပွီးနပေါပွီ။ ပွိုငျဘကျတှနေဲ့ တငျးမာနတေဲ့ကှငျးလယျတိုကျပှဲမှာ ပါဝငျပတျသကျနတောကွောငျ့ သူမဟာ ထိုငျခုံမှထဖို့ငွငျးဆနျခဲ့ပွီး သူမကစားပှဲ ပွီးဆုံးသှားတဲ့အထိ အခြိနျ
အနညျးငယျပေးဖို့ တောငျးဆိုနခေဲ့ပါတယျ။” ကလေး လာ၊ ငါတို့သှားရတော့မယျ “လို့ သတို့သမီးရဲ့ယောက်ခမက ပွောနခေဲ့ပွီး “အခမျးအနား မကွာခငျစတော့မယျ“ လို့ သူမရဲ့သတို့သားက ဘေးကနသော အျောဟဈနခေဲ့ပါကွတယျ။ သူတို့အားလုံးက သတို့သမီးကစားတာကို
မရပျတနျ့နိုငျတာကွောငျ့ ဖခငျဖွဈသူက သတို့သားကို ပါးရိုကျပဈပွီး ”မငျးဘာဖွဈနတောလဲ? မငျးရဲ့ဇနီးကိုတောငျ မငျး မထိနျးခြုပျနိုငျဘူးလား အခုခကျြခငျြး သူ့ကိုဆှဲထုတျ“ လို့ ဒေါသထှကျနတေဲ့ သတို့သားဖခငျကဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျသတို့သားက သူ့ရဲ့သတို့သမီးကို
နောကျဆုံးအကွိမျ တောငျးဆိုခဲ့ပွီးနောကျ သူနဲ့သူရဲ့သူငယျခငျြးနှဈယောကျက သူမအားထိုငျခုံပျေါ ကနဆှေဲထုတျပွီး ကှနျပြူတာဆိုငျရဲ့အဝေးကို ဆှဲချေါသှားခဲ့လိုကျကွပါတော့တယျ။ အဲ့ဒီအဖွဈအပကျြ ဖွဈပွီးနောကျမှာတော့ သတို့သမီးဟာ မင်ျဂလာပှဲကို ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့
မကငျြးပနနေိုငျခဲ့ပါဘူး။ လူအခြို့ကလညျး သူတို့ကလူသိမြားတဲ့ဗီဒီယိုဖွဈစဖေို့အတှကျသာ တမငျရိုကျကူးစီစဉျထားတယျ လို့လညျး ထငျကွေးပေးထားကွပါသေးတယျ။ဘယျလိုတောငျလား သတို့သမီးရယျ ယောက်ခမကွီးတှတေောငျ လာဆှဲချေါရလောကျတဲ့အထိ ပါလား။
← သုံးနှစ်​အရွယ်​ကလေးငယ်လေးရဲ့ အသက်ကိုနှုတ်ယူသွားခဲ့တဲ့ ရှပ်အင်္ကျီ​ပေါ်က ရွှေကြယ်သီးလေး
အိမ်မှာကြောင်တစ်ကောင်ရှိရင် ဒီနိမိတ်တွေ သိထားပါ →